Panasonic Archives - Technology Khabar
काठमाडौं, ३ माघ । पानासोनिकले निकै महँगो किसिमको ट्याबलेट सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले हालै विश्व बजारमा टफप्याड एफजेड ए २ नामक (Toughpad FZ-A2) रग्ड ट्याबलेट ल्याएको हो । यो […]
काठमाडौं, ७ असार । नेपालका लागि पानासोनिक मोबाइल फोनको एकमात्र आधिकारिक विक्रेता एलाईड ट्रेड लिङ्क इन्टरनेशनल प्रा. लि. ले पानासोनिकका नयाँ मोबाइलहरू नेपाली बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले पानासोनिक मार्क, […]
काठमाडौं, १८ माघ । पानासोनिक मोबाइल फोनको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता तथा वितरक एलाइड ट्रेड लिंक इन्टरनेशनलले नयाँ स्मार्टफोन पानासोनिक इलुगा स्विच (Panasonic Eluga Switch) नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ। यो […]
काठमाडौं, १८ भदौ । पानासोनिक कम्पनीले बर्लिनमा चलिरहेको आईएफए इभेन्ट-२०१५ मा आफ्नो पहिलो फोर के ओएलईडी (4K OLED) टेलिभिजन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको ६५ इन्चको फोर के […]
काठमाडौं, २७ कात्तिक । जापानी कम्पनी पानासोनिकले भारतीय बजारमा नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले भारतीय बजारमा एलुगा सीरीजको एलुगा एस (Eluga S) सार्वजनिक गरेको हो । पानासोनिकले भारतीय […]
काठमाडौं, १९ कात्तिक । जापानी कम्पनी पानासोनिकले निकै सस्तो स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । पानासोनिकले टी सिरिजको टी ९ स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको हो । यो फोनको स्क्रीन ३.५ इन्चको छ […]
काठमाडौं, ७ असोज । नेपालकोलागि कार्बन मोबाइलको आधिकारिक विक्रेता एलाइड ट्रेड लिङ्क इन्टरनेशनलले पानासोनिक मोबाइल फोन नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पानासोनिकका जापानी तथा भारतीय प्रतिनिधिहरुमाझ पानासोनिकका […]